बाँदरको यो हुल जसले आफ्नो सन्तान मा’रेको बदलामा २५० कुकुरकाे ज्या’न लियाे – Patrika Nepal
पुष ४, २०७८ आइतबार 46
नयाँ दिल्ली : भारतमा आ’क्रोशि’त बाँदरहरुले दर्जनौं कुकुर मा’रिदि’एका छन् । भवनको छत तथा रुखका टु’प्पामा लगेर बाँदरहरुले कुकुरको ह’ ‘त्या ग’रिदिएका हुन् । महाराष्ट्रको विड जिल्लामा ककुरहरुको एउटा समूहले बाँदरको एउटा बच्चा मा’रिदि’एप’छि त्यसको ब’दलामा बाँदर उत्रिएको हो ।
जिल्लाको मजलगाओन र लभुल गाउँमा बाँदरहरुको एउटा हुलले कुकुर मा’रिदि’एको थियो । बाँदरले वरपर भएका कुकुरलाई टोकेर घरको छत तथा रुखको टु’प्पोबाट ख’सा’लेका थिए । आ’क्रो’शि”त बाँदरहरुले बिद्यालयका बालबालिकालाई पनि खेदेका थिए ।
कुकुर देख्नेवित्तिकै बाँदरले अग्लो रुखको टुप्पो वा भवनको छतमा लगेर ख’सालि’दिएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार बाँदरले पछिल्लो एक महिनामा मात्र २५० कुकुरलाई अग्लो ठाँउबाट ख’सा’लेका छन् । आ’क्र’म’ण’बारे सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा बाँदरले निर्दयी ढंगले एउटा कुकुरको बच्चालाई टो’के’र घरको छतमा पु¥याएर त्यहाँबाट ख’सा’लेको देख्न सकिन्छ ।
बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीयले वन विभागका अधिकारी गु’हा’रेका थिए । तर, विभागबाट खटिएका कर्मचारीले बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकी फर्किएका थिए । स्थानीयका अनुसार बाँदरहरुले कुकुरमाथि अझै ब’द’ला लिइरहेका छन् ।
केही कुकुरहरुले बाँदरको एउटा बच्चा मा’रिदि’एप’छि बाँदर योजनाब’द्ध ढंगले प्रतिकारमा उत्रिएका हुन् । विभागका कर्मचारीहरुले बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि स्थानीयले नै कुकर जोगाउन थालेका छन् । बाँदर देख्ने वित्तिकै उनीहरुले भगाउनेदेखि कुकुरलाई सुरक्षित क्षेत्रमा पठाउन थालेका छन् ।
Prevकाठमाडौँको लाजिम्पाटबाट पुर्वमन्त्रीकी छोरी पक्राउ, यस्तो छ कारण
Nextदाँतको किरा मार्ने घरेलु सजिलो उपाय जानि राखौं
घास काटन जाँदा भालुसंग लडाई ! भाग्यले बचिन सुर्जकला- शरीरको यस्तो..पुरै गाउँमा भालु आतंक हेर्नुहोस
कठै ! पैसाको कारोवार गर्दा आफ्नै साथीसँग कुरा मि लेन अहिले यस्तोसम्म भयो (भिडियो हेर्नुस्)